7 Nzira dzeKuva Nechido Kana Izvo Zvisingasvike Nenzira - Blog
Nzira 7 dzeKuva Nechido Kana Izvo Zvisingasvike Nenzira
Kana mumwe munhu akanzi akutsanangure mushoko, chinhu chekutanga chakauya mupfungwa chaisave 'chinoshingairira.'
Unotambudzika kuratidza kushingairira zviro.
Zvimwe kuri kubasa…
Ndezvipi zvinangwa zvina zvakakosha zvepfungwa
Zvichida mukuru wako akataura pamusoro pekuti iwe unoratidzika sekuti haupi basa rako zvese zvako. Kana kuti iwe unozvishandira uye unozviona zvakaoma kuisa kushingairira mune rako bhizinesi raunoziva kuti rinoda kubudirira.
Kana kuti zvimwe zviri muhupenyu hwako ...
Pamwe unonetseka kuratidza kushingairira kushamwari dzako, mhuri, kana mudiwa. Pamwe zvinonzwa mutorwa kuti unakirwe nezano revamwe vanhu, mazano, kana kupemberera nguva huru muhupenyu hwavo navo.
Uye pamwe unozviona zvakaoma kuti unakirwe nezvinhu zvako wega…
Nzendo huru, kukwidziridzwa, kana chero chinhu chinoitika muhupenyu hwako icho chingaite kuti vanhu vazhinji vabude mumashampeni macorks anongopfuudza iwe tenga usingazivikanwe, kana kunyangwe zvisingazivikanwe zvachose.
Pamwe ndizvo zvese zviri pamusoro.
Izvo hazvina basa chaizvo. Mubvunzo wakakosha ndewekuti:
Ungaite sei kuti uve nechido?
Iwe ungade yako isingasvike-inofarira nzira yehupenyu kuti ichinje.
Iwe unoda kuve nechido pamusoro pezvinhu. Kwete kungoitira kuti vamwe vanhu vanzwe zvakanaka kana vawana chimwe chinhu, asi zvakare nekuti, ngatitaure chokwadi, zvinoita kunge zvinonyanya kunakidza kupfuura mararamiro aunoita.
Vamwe vanhu vanongoita kunge vari kukwanisa kurarama munguva, kunakidzwa noupenyu, kuona mikana nezvinobvira, uye kupemberera zvinhu zvakanaka, zvingave zvihombe kana zvidiki.
Ipo iwe uchigara uchingoda kutarisisa pane zvakashata uye uchiona zvakaoma kuti uwane kushingairira, zvisinei kuti uri kutarisira chimwe chinhu zvakadii, kuti wakashanda zvakaoma sei kuti chiwane, kana kuti unofara sei nezvazvo zvakadzama pasi.
Saka ungaite sei kuti uve nechido? Zvese zviri pamusoro pezvinhu zvinoitika kwauri, uye kune vamwe.
Ungaratidza sei vamwe vanhu kuti unofarira zvinhu?
Uye iwe unogona sei kupinza mune iwo manzwiro eshingairo chaiyo uye mufaro uyo unoratidzika kunge unouya nenzira yakasununguka kune vamwe vanhu?
Heano matipi mashoma ekujekesa muyero wekushingairira muhupenyu hwako.
1. Tarisa pfungwa dzako pane izvozvi.
Chimwe chezvikonzero zvikuru zvinoita kuti vanhu vatambure kuve nechido ndechekuti ivo havana kumbobvira varipo panguva iyoyo.
Ivo vanogara vachifunga nezve izvo zvavakatadza nezuro kana svondo rapfuura.
Uye kana ivo vasiri kutarisa kune zvakapfuura, ivo vari kunetseka nezveramangwana, uye zvese zvavanazvo pane yavo yekuita-rondedzero.
Zvakaoma kuve nechido nezve izvo zviri kunyatso kuitika pamberi pemeso ako muno uye ikozvino paunenge uchifunga nezuro kana mangwana.
Nekudaro, nhanho yekutanga yekuwedzera kushingairira ndeyekutarisa kwako nhasi.
Chero iwe paunozvibata uchigara pazvinhu zvisiri kuitika panguva ino, tsvaga nzira yekuzvidzorera.
Kutora imwe nguva yekufema zvakadzama uye kutarisa maruzha akakukomberedza inogona kunge iri nzira huru yekusimudzira kuziva kwako.
kusaina munhu anokufarira kubasa
Tarisa kwakatenderedza iwe uye ushingaire kucherechedza runako muzvinhu zvaunoona mazuva ese.
Gadzira runyorwa rwezvinhu zvese zvaunotenda zvezuva iro, kana zvese zvinhu zvawakawana, zvisinei kuti zvinoita kunge zvidiki.
Izvi zvinokubatsira kuti uwedzere kukoshesa zvese zvaunazvo uye nezvezvinhu zvakakukomberedza, izvo zvinozoreva kuti iwe unowana zvakanyanya kufarirwa nezvazvo.
2. Kunetseka zvishoma.
Vanhu vazhinji vanonetsekana kufarira zvinhu nekuti vanogara vachinetseka nezve 'ko kana.'
Ivo vanogara vakagutsikana kuti chimwe chinhu chichaenda chisina kunaka uye tarisa pane icho pane pane zvese izvo zviri kunyatso kuitika.
Kana iwe uchikwanisa kuzvidzidzisa kunetseka zvishoma uye kungoenda nekuyerera, saka zvichave zviri nyore kwazvo kunzwa uchishingairira nezvezvakanaka zvinhu zvinoitika, zvingave zvikuru kana zvidiki, muhupenyu hwako kana hupenyu hwevanhu vakakukomberedza.
Kufungisisa, kufema maekisesaizi, uye zvirongwa zvakanaka zvekuita zvese zvinogona kubatsira iwe kuisa kunetseka kwako kudivi uye unakirwe nezvinhu zvakanaka muhupenyu zvichiripo.
3. Deredza zvaunotarisira.
Iwe unogona kunetseka kuti unzwe kushingairira nezve hupenyu nekuti unogara uchiisa bhawa zvakanyanya uye uchikumbira zvakawandisa.
Ipo zvakanaka kuti uve nechinangwa chakakwirira uye uchizvimanikidza kuenda kune imwe nhanho, kana iwe uine zvakawanda zvinotarisirwa saka hauzogone kuodzwa moyo.
Nenzira iyoyo, kana zvinhu zvikaita zvirinani kupfuura zvaunotarisira, sezvazvinowanzoita, iwe unonzwa nenzira yechishuwo kuva nechido chakakura kupfuura zvawaizoita dai waizofunga kuti une gomo rakakura kukwira.
Izvi zvese ndezvekurova svikiro rinofara pakati pekusave pasi pauri uye kuve nechokwadi chekuti une chimwe chinhu chekupemberera kana zvinhu zvikashanda zvakanaka.
4. Isa godo padivi.
Kushaikwa kwekushingairira pamusoro pevamwe kubudirira kwevanhu dzimwe nguva kune zvakawanda zvine chekuita negodo.
Kana chako chikuru manzwiro paunonzwa evamwe evhangeri nhau dziri shanje, saka zvinongoitika kuti haupindure nechido.
Kana iwe ukaona uchinetsekana negodo, saka yakanaka yekutanga nhanho inogona kuve yekuganhurira kushandisa kwako pasocial media.
Isu tese tinoziva kuti vanhu kazhinji vanongogovana izvo zvakanaka zvinhu, kwete kwavo kunetseka.
Asi kana iwe uchinge uchiona isingagumi mifananidzo yevanhu vanoita kunge vari kuita zvinoshamisa muhupenyu, zvinogona kunge zvakaoma kuti uchengete izvo mumaonero uye uzvimise kubva pakuita godo.
Nekudaro, kutsika kumashure kana kudzikisira kushandisa kwako nhepfenyuro yemagariro kunogona kuve kukuru kwekugadzirisa chikara chine maziso egirini.
Kana iwe ukanzwa nhau dzinonakidza dzevanhu mumunhu panzvimbo pepamhepo, zvichave zviri nyore kwazvo kuvafarira. Uye iwe zvakare unowanzoita kuti unzwe nezve nzira yematombo iyo yakazovaendesa kune kwavo chinangwa, chinozoisa zvinhu mumaonero ako.
Kunyangwe iri pasocial media kana muhupenyu chaihwo, ita nhamburiko yekumira kuyera yako wega hupenyu uye zvibodzwa zvinopesana neizvo zvevanhu vakakukomberedza.
5. Funga nezveupenyu hwako, zvinangwa, uye mufaro.
Kana iwe uchinetseka kuratidza kushingairira nezve chero chinhu muhupenyu hwako, kunyangwe zviitiko zvakakura senge pakupedzisira kuenda pazororo rehupenyu hwese, kuwana iro hombe kukurudzira, kana hombe nhau mumhuri yako, saka inogona kunge iri nguva yekuratidzira.
Pamwe iwe unongova munhu akadzikama, akadzikama uyo anonzwa achifara asi asingatombonyanyo shingairira nezve chero chinhu. Uye izvo zvakanaka.
Asi zvakakosha kuti utarise kana kushayikwa kwako kwekushingairira hupenyu kungave kunobva mukusafara kana kusagutsikana.
Tora nguva yekufunga nezvenzira yako muhupenyu. Izvo iwe zvawakawana uye izvo iwe zvauri kuvavarira. Funga nezve izvo zvingave zvisipo uye kana iwe uchida kuita chero shanduko.
Zvinogona kunge kuti shanduko imwe diki kune mararamire ako hupenyu inogona kuita mutsauko wakakura kune tariro yako maonero. Uye, ngatizvitarisei, kana iwe uchinzwa kuve netariro, iwe uri mukana wakanyanya wekuve nechido.
6. Usazvidya moyo nezvekuti uchasangana sei.
Pamwe uri munhu anofarira mukati asi haudi kuzviratidza nekuti unonyara uye unovenga kuve nehanya newe.
Saka iwe hauite kuratidzwa kukuru kwezviwanikwa zvako kana simba rako remukati rezvinhu zvaungave uchiita. Iwe ingo chengeta icho chiri muhombodo kumusoro.
Kunyangwe ichi chingave hunhu hwako hwepanyama, uri kuverenga ichi chinyorwa kuti udzidze maitiro ekuwedzera kushingairira, uye izvi zvinogona kusanganisira kusundira kupfuura nzvimbo yako yekunyaradza.
Izvo iwe zvaunofanirwa kuziva ndezvekuti kana munhu akataura kuratidza kwavo kufarira kwechimwe chinhu, zvinowanzogara zvichipa mufananidzo wakanaka wemunhu iyeye. Hapana anozofunga chero chinhu kunze kwemifungo yakanaka pamusoro pako kana ukaratidza kushinga kwauri.
7. Fake icho kusvikira uchichigadzira.
Zvakanaka, saka kunyepedzera kuva chimwe chinhu chausiri hakusi kugara kwakanaka kuraira. Asi, mune ino kesi, kunyepedzera kuve unofarira kupfuura zvauri chaizvo kunogona kuita mutsauko kupfuura iwe waungafunge.
Funga nezvazvo sekudzidzira iwe pachako kuti unzwe uine shungu nezvezvinhu.
Iwe ungatofanira kuzvimanikidza kuti uzviite, asi kana vamwe vanhu vaine nhau dzakanaka, edza kunyora makorokoto emakomendi pane avo enhau enhau, uchivatengera chimwe chinhu chekutaura zvakanaka, kutumira makadhi, kuvapa kumbundirana kukuru (nemvumo yavo) , zvichikurudzira kudya kwemhemberero…
Mune yako kesi, zvisundire iwe kuti ugovane zvawakawana neavo vaunoda uye nekurumbidza mhemberero, kana kungo tora nguva shoma yekufarira mune zvawakazadzisa nekumaka chiitiko neimwe nzira.
kuti ungagare sei uchifara muwanano
Kana iwe uchikwanisa kutora kunyangwe akati wandei matipi ari pamusoro mukufunga, iwe unosungirwa kutanga zvechokwadi kunzwa kuwedzera kushinga pamusoro pezvose zvakanaka zvinhu muhupenyu.
Uye izvo, pachazvo, chimwe chinhu chakakodzera kupemberera.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuita nechido? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
Ungaita Sei Kuti Uwedzere Kufadza, Kwete Kufinha: 15 Hapana Bullsh * t Matipi!
kuti uite kana iwe wabhowekana
sei t vamwe vanhu vachichema
kuenda kupi neshamwari yako yepamwoyo
ndoziva sei kuti im attractive
maitiro ekuudza kana waunoshanda naye achikwezva iwe